Haleellaa Yunivarsiitii Keeniyaa irra Al Shabaab geesseen 147 du'anii 70 ol madoo ta'an - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Haleellaa Yunivarsiitii Keeniyaa irra Al Shabaab geesseen 147 du’anii 70 ol madoo...
Haleellaa Yunivarsiitii Keeniyaa irra Al Shabaab geesseen 147 du’anii 70 ol madoo ta’an
Haleellaan kuni kan raawwate har’a gara sa’aa ganamaatti yeroo barattoonni heddu hirribaa hinka’initti. Xiyyeeffannan rukkutaa kanaa irra guutummatti barattoota yunivarsiitichaa kanniin amantaa kiristaanaa hordofan ta’uunis hubatameera. Ammatti akka ragatti kan tuqame, barattoota Muslimaa sagada Subiif masjiida keessa turan irra wonti gaye tokko jiraachuu dhabuu isaati.
‘Sagalee dhukaasaa heddutu ture. Kan woraanni dhukaasa wolgeeddaru fakkaata,’ jedhe Collins Wetangula haalli yeroo san ture maal akka fakkaatu yoo gabaastotatti himu. Hidhattoonni haleellaa kana raawwatan sagalee isaanii olqabaa afaan Suwaahiliitiin ‘nuti Al Shabaab’ jedhaa turuu isaaniis dubbateera.
Yeroo haleellaan raawwataa ture sanitti barattoonni heddu doormii ufitti cufuufii kanniin biroo ammoo osoo itti dhukaasamu dheessuu isaaniis Augustine Alanga APti himeera. Ija isaatiin hidhattoota 5 fuula isaaniitti haguuggatan arguu isaas ragaa bayeera.
Dubbi-himaan Al Shabaab Alii Mohaamud Ragee gareen isaanii haleellaa raawwatame kanaaf kan itti gaafatamummaa fudhatu ta’uu eeree; woraanni isaanii mooraa yunivarsiitichaa keessatti tankaarii guddaa geggeessaa turuu isaa raadiyoo Somaalee tokkotti bilbilaan himeera.
Gareen Al Shabaan torbee dabre keessa hoteela Makka-al-Mukarramaa magaalaa Moqadishuutti argamu sa’aa 12 oliif dhuunfatee du’a namoota 24f sababa ta’uun niyadatama.
Previous articleFiilmiin Ajaa’iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf
Next articleHaleellaa Al Shabaab Yunivarsiitii Garissaa irratti raawwateen laakkofsi barattoota ajjeefamanii 147 gaye